Manaova sola - Ny torohevitra mahasoa indrindra | Bezzia
Torohevitra mahasoa hanafenana ny sola tokony ho fantatrao
Ny fihenan'ny volo dia iray amin'ireo olana sedrain'ny olona maro. Izany no mahatonga ny safidy maro kokoa tsy maintsy azontsika atao manafina ny sola amin'ny fomba azo ampiharina kokoa ary mampiseho kely kely kokoa izy io. Ny mifankahita amin'ny volo indray dia zavatra mampitombo ny fahatokisan-tena foana ary anio dia hanatanterahantsika izany.
anefa Ny alopecia dia matetika ao aminy kokoa noho izy ireo, Marina fa mety misy antony samihafa tsy maintsy hiatrehantsika azy. Noho izany, tsara kokoa hatrany ny ho tratra miaraka amin'ireo vahaolana efa eo am-pelatanana. Te hahafantatra momba izany ve ianao?
1 Afeno ny sola: volom-bolo vaovao
4 Tsipika mikraoba
5 Makiazy volo
Afeno ny sola: volom-bolo vaovao
Na dia somary mifanipaka aza izy io dia tsy dia izany loatra. SATRIA raha miresaka momba ny fihenan'ny volo isika, dia marina fa tsy mitovy foana ny mitranga amin'ny faritra rehetra. Izany dia mahatonga ny fidirana hidina lalindalina kokoa na angamba ny tampon'ny loha na 'satroboninahitra'. Noho izany, tsy misy toy ny manandrana manety volo vaovao izay milamina kokoa. Ny fanapahana volavola, miaraka amin'ny sosona ary amin'ny bangs, raha azo atao, dia safidy tsara hafa. Ny habetsaky ny volo kely fohy kokoa dia tsara ihany koa, satria izy io dia hanao an'io optika io hanana volo bebe kokoa.
Indrindra indrindra rehefa miresaka momba ny volo fohy kokoa isika, ity dia iray amin'ireo vahaolana tsara indrindra. Iray amin'ireo vahaolana haingana ireo izay mamela antsika hanana valiny tena lehibe. Azontsika lazaina izany Izy io dia karazana vovoka vita amin'ny keratin ary izany koa dia hanaraka, noho izany dia mora ny mametraka azy ireo. Marina fa hisy foana ny fanamboarana vokatra, toy ny spray, izay hiantoka ny faharetan'izy ireo amin'ny volo, indrindra raha somary be rivotra izy na te-hitafy azy ireo lava. Aleo manatona dokotera manam-pahaizana manokana satria raha ampiasainao matetika loatra dia afaka manome anao ny farany matavy ao amin'ny volonao izany. Vahaolana vonjimaika tonga lafatra ny mahita anao volo indray.
Rehefa mbola tsy manana fihenan'ny volo somary voadona isika dia afaka mampiasa extensions foana. Indrindra satria izy ireo dia mety afaka manafina ny volo tsara indrindra ary manome azy io ho voajanahary sy voluminous farany vita, araka izay itiavantsika azy. Araka ny fantatrao tsara, misy karazana fanitarana maro izay mety ho hitanao. Ny sasany amin'izy ireo dia azo hanaovana mandritra ny fotoana maharitra ary ny sasany kosa hapetraka na esorina amin'ny karazana volo.
Amin'ny ankapobeny, marina fa ireo antsoina hoe micro-laina dia ampiasaina hanomezana fantsom-peo ho an'ny tapany ambony amin'ny loha. Mba tsy hitanao fa very ny volo. Satria io koa no tanjon'ny safidy voajanahary tahaka ilay resahantsika amin'izao fotoana izao. Ankoatry ny fanafenana ny sola, tsy maintsy milaza ihany koa izahay fa azonao atao mandritra ny herinandro na volana izany, noho izany dia iray amin'ireo tombony lehibe azo noho ny vahaolana hafa. Mba hanaovana izany dia tokony hanontany amin'ny salon hatsaranao mahazatra ianao ary hankafy ny vokatra satria na ny rivotra aza tsy ho afaka miaraka aminy.
Amin'ny fotoana manokana fotsiny dia ananantsika ny makiazy volo. Izany dia mahatonga azy io ho tonga lafatra mba hanafenana an'io 'satroboninahitra' io na hampitomboana kely ny faka, izay mitarika antsika hahita ny tenantsika manana volo bebe kokoa na hanao veloma ny sola. Androany dia manana safidy marobe isika, avy amin'ireo nopetahany spaonjy mando toy ny manaingo tarehy, mba hamafazana ny famaranana. Misy alokaloka daholo, ka tsy sarotra ny misafidy ny anao ary amidy eny amin'ny fivarotana lehibe ihany koa, miaraka amin'ny loko. Safidy iza no hofidinao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » beauty » Torohevitra mahasoa hanafenana ny sola tokony ho fantatrao
Manicure frantsay ao an-trano ho an'ny fantsika fohy